INdlovu Youth Choir ifundisa abantu ngomculo wayo | Scrolla Izindaba
INdlovu Youth Choir ifundisa abantu ngomculo wayo
Idume ngokukhazimulisa amajaji e-America’s Got Talent ‘esiteji esikhulu kunazo zonke emhlabeni’ ngowezi-2019, iNdlovu Youth Choir evela esifundazweni sase-Limpopo, iqhubekile nokukhulumisa abantu ezinkundleni zokuxhumana ngezihloko ezahlukahlukene ezibalulekile ngamaphimbo ayo amtoti.
Noma bengaphumelelanga ngemuva kokufika kowamanqamu womncintiswano wamathalente, amaphimbo abo ayaqhubeka nokukhuthaza ushintsho.
Ekuqaleni kukaNhlolanja kulo nyaka bakhiphe iculo elithi ‘Jab’, elalikhuthaza wonke umuntu ukuthi “enze okulungile” athathe i-jab (umuthi wokugoma we-Coronavirus) – ngemuva kokulethwa kwenqwaba yokuqala yemithi yokugoma i-AstraZeneca eNingizimu Afrika.
NgoLwesibili, leli khwaya elineminyaka eyi-12 likhona livela esigodini sase-Moutse likhiphe enye ividiyo yomculo yokubungaza i-World Hearing Day ebibizwa nge-International Ear Care Day yi-World Health Organisation kusukela ngowezi-2007 yaze yashintshwa ngowezi-2016.
Bacule nengoma ethi-‘What a wonderful world’ kaLouis Armstrong, besebenzisa ulimi lwezandla – ukuze abantu abanezinkinga zokuzwa bakwazi ukuyijabulela futhi baqonde amagama asengomeni ebabazekayo.
Noma ngabe bakwenza ukuhlala ohlwini lwezingoma ezishisa izikhotha noma ngezinye izizathu, amaphimbo ayi-harmonic evela kwi-Ndlovu Youth Choir nayo akhuthaza ushintsho.
Usuku Lomhlaba Wonke Lokuzwa lugujwa ngomhla zintathu kuNdasa minyaka yonke kanti ingqikithi yomkhankaso yowezi-2021 ithi-‘Hearing Care for All’.